Ihlukile enkabeni ye-Evosmos Guest House Anastasia - I-Airbnb
Ihlukile enkabeni ye-Evosmos Guest House Anastasia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Anastasia
U-Anastasia uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-93% wezivakashi zakamuva.
Ifulethi elivuselelwe ngokuphelele enkabeni ye-Evosmos Ihlomele Ngokugcwele ukuhlala ntofontofo futhi enhle Liyindawo engu-45sqm ekwazi ukuhlalisa abantu abangafika ku-4. Indawo yefulethi inikezela zonke izidingo zesivakashi (izindawo zokudlela, amathilomu, amabha. , Pharmacy, izitolo, esitolo, ebhikawozi, amabhange, njll). Itholakala ku-1 'kude nezithuthi zomphakathi kanye ne-50m ukusuka erenki yamatekisi.Inakho konke okudingwa yisivakashi !!
I-Guest House i-Anastasia iyindawo enethezekile enekamelo lokulala, igumbi lokugezela kanye negumbi lokuphumula elibanzi lapho kukhona usofa wekhoneni ongashintshwa ube umbhede futhi ungahlalisa abantu abangu-2 ngaphezulu. Kukhona nedeski lomsebenzi. Ukufinyelela kwe-WiFi kwamahhala. Ikhishi elifakelwe isitofu sikagesi, isiqandisi, i-microwave, umenzi wekhofi, igedlela, i-toaster, izitsha, izibuko nezinye izinto zokulungiselela noma yiluphi uhlobo lokudla. Kukhona futhi isomisi sezinwele, i-ayina, ibhodi loku-ayina. I-air conditioning, i-Full HD smart TV ene-Netflix nomshini wokuwasha.
4.92 · 66 okushiwo abanye
Indlu yetivakashi Anastasia itholakala Evosmos sikwele. Ungapheqa Evosmos emakethe ukwenza shopping yakho futhi ujabulele ikhofi lakho noma ukudla kwakho esigcawini umatasa. A emnandi okunye ukuzijabulisa yokuveza iqhubeka anikezwa Evosmos kaMasipala Cinema bonke abathandi Cinema noma bukela amamuvi amaningi noma ukhethe amamuvi ekhwalithi ephezulu, ngochungechunge lwamamuvi amasha avela Emhlabeni kanye Nesinema YamaGreki.
Ama-Cinephiles abo bonke ubudala bayoba nethuba lokuchitha isikhathi sabo samahhala ngenjabulo, bebuka amafilimu amasha aqalayo avela ohlelweni olucebile lwe-Cinema kaMasipala, ngesithombe sedijithali nomsindo, ekamelweni elijwayelekile laseYurophu elinezihlalo ezintsha ezikhululekile.
Λατρεύω τα ταξίδια και έχοντας πραγματοποιήσει πολλά στην Ελλάδα και το εξωτερικό φρόντισα να φτιάξω ένα διαμέρισμα με όλες τις ανέσεις που να μην του λείπει τίποτα!!Θα είμαι στη διάθεση σας για ότι χρειαστείτε και για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσετε σχετικά με την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας!Σας περιμένω με χαρά!!
Λατρεύω τα ταξίδια και έχοντας πραγματοποιήσει πολλά στην Ελλάδα και το εξωτερικό φρόντισα να φτιάξω ένα διαμέρισμα με όλες τις ανέσεις που να μην του λείπει τίποτα!!Θα είμαι στη δ…
Ukulethwa kokhiye kwenziwa ngokuba khona kwethu ngesikhathi sokufika. Sizobe sikhona ukuze sikwamukele futhi sikunikeze okhiye nanoma yiluphi ulwazi oludingekayo lwefulethi. Bese sishiya izivakashi zethu zodwa ziphumule futhi zijabulele ukuhlala kwazo sengathi zisendlini yazo. Kodwa ngesikhathi esifanayo siyatholakala futhi sizimisele ukuphendula yonke imibuzo yabo nanoma yiziphi ezinye izeluleko abazidingayo. Sisesandleni sakho nganoma yini engenzeka noma nini.
Ukulethwa kokhiye kwenziwa ngokuba khona kwethu ngesikhathi sokufika. Sizobe sikhona ukuze sikwamukele futhi sikunikeze okhiye nanoma yiluphi ulwazi oludingekayo lwefulethi. Bese s…
Inombolo yepholisi: 00001124209
Hlola ezinye izinketho ezise- Evosmos namaphethelo